Uyikhetha njani kwaye uyidibanise ifonti yophawu lwakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Khetha udibanise iifonti zorhwebo lwakho
USusana Do Carmo | | Idizayini yeMifanekiso
Xa siyila ubume bomzobo, lolunye lolona khetho lubalulekileyo ekufuneka silwenzile kwaye ngamanye amaxesha olusithatha ixesha elide, kukuba iifonti eziza kumela uphawu. Omnye indibaniselwano elungileyo yamagama iya kubangela umfanekiso ohambelanayo noqinileyo.
Iphalethi yombala emele uphawu lwenziwe ngezixhobo ezahlukeneyo. Kwenzeka into efanayo nakwimigca, asinakugcina enye, kodwa kufuneka Khetha ubuncinci ama-2 okanye ama-3 zidityaniswe ngokuchanekileyo kwaye zibonakala zinomtsalane. Ewe ngokunjalo, nje ukuba le mithombo ikhethwe, kufuneka sinamathele kuyo kwaye ungafaki ezinye ngokungakhethiyo kuba oku kuya kunciphisa ukwamkelwa kwegama.
Ukuba sisebenzisa iifonti ezi-2 okanye ezi-3 kuphela kwaye sikwenza rhoqo, abathengi bakho baya kuhlala bekwazi ukukuchonga. Uphawu olulula ukuqonda ukudlulisa ukungathí sina nokuzithemba, eya kuthi ekugqibeleni ikhokelele ekuthengiseni ngakumbi nakubathengi abatsha.
Lo mgaqo usebenza kuzo zonke iintlobo zeenkampani kunye neempawu, ngokungathi ungumyili wezinto ezizimeleyo okanye ukuba uqhuba ibhlog yakho kwi-intanethi. Uya kuhlala ufuna ulwazi olucingisisiweyo noluzinzileyo.
1 Ungazikhetha njani iifonti kunye nokusetyenziswa kwazo
1.1 Uhlobo lwamagama esihloko okanye izihloko
1.2 Ifonti yamaLungu eetekisi
1.3 Ifonti ekhawulezileyo
2 Eminye imigaqo yokudibanisa iifonti
2.1 Umyalelo obonakalayo kunye nolawulo oluphezulu
2.2 Izichasi ziyatsala
2.3 Musa ukudibanisa iifonti ezifanayo
Ungazikhetha njani iifonti kunye nokusetyenziswa kwazo
Ukukhetha iifonti yakho, kufuneka uqale ube nombono wento oyifunayo. Ngaba uphawu lwakho lolutsha kwaye luyonwabisa? Okanye ngaba ilungelelene kwaye ilula? Sicebisa ukuba ubhale ezinye Amagama ama-3 achaza ubuntu begama lakho kwaye ngokusekwe kuloo magama uya kukhangela iifonti.
Iifonti ezimbini okanye ezi-3 ozifunayo kufuneka usebenzise oku:
Uhlobo lwamagama esihloko okanye izihloko
Le yifonti oza kuyisebenzisa izihloko, izihloko okanye nasiphi na isicatshulwa esifuna ukuhoywa kwasekuqaleni. Kungcono ukhethe enye kulula ukufunda uhlobo lochwethezo, Kwaye oko, kuxhomekeke kubuntu begama lakho yomelele kwaye ibetha.
Ifonti yamaLungu eetekisi
Olu luhlobo lohlobo oza kulusebenzisa kubo bonke imizimba yokubhaliweyo, imihlathi kunye nemibhalo engezantsi. Ukuthathela ingqalelo ukuba uza kubhala izixa ezikhulu zesicatshulwa kule fonti kwaye izakubancinci, kufuneka ifundeke kwaye ibelula ngokulula ukwenzela ukuba ungathwalisi umthwalo umfundi. Xa uyikhetha, kuya kufuneka uyithathele ingqalelo loo nto yenza umdlalo olungileyo kunye nefonti yezihloko, kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba linokunxulumana.
Kwimeko apho uthatha isigqibo sokusebenzisa ifonti yesithathu, ungongeza ifonti egxininisayo, oko kukuthi, ifonti esebenza kuyo gxininisa okanye ugqamise igama okanye ibinzana elithile. Iluncedo kakhulu ngakumbi ukuba ufuna ukuvelisa ukubonwa okuqwalaselweyo okungasisihloko okanye oko kufuneka ibethwe ngakumbi kunesiqhelo. Sicebisa ukuba ukhethe ifonti ebhalwe ngqindilili eyahlukileyo kwezinye, umzekelo, ukuba iifonti zakho zangaphambili ziyiSans serif, unokukhetha ifonti egxekayo.
Ngoku ukuba uyakwazi ukusebenzisa ifonti nganye, ungaqala ukuzikhangela ngokusekwe kumagama owakhethileyo isalathiso. Nantsi eminye imizekelo:
Ukuba uphawu lwakho zakudala, ezintle kwaye zizolile, Unokukhetha uhlobo lwe-Serif typeface, engqindilili, ende kunye nokubetha izihloko, kunye nenye engacacanga kwaye elula yeSans serif kwizicatshulwa. Uhlobo lokuchwetheza kwi-aksenti inokuba ngumgca we-italic ojongeka umhle kwaye unesitayile.
Umdibaniso weSerif, i-Sans Serif kunye neefonti ze-Italic.
Ukuba uphawu lwakho encinci, yanamhlanje kwaye ilula, Unokukhetha uhlobo olujikeleziweyo nolubanzi lwe-sans serif yezihloko, kunye ne-thinner kunye ne-square sans serif typeface yeetekisi. Uhlobo lokuchwetheza kwi-aksenti lunokuba lucekeceke kancinci ukuba luhlukane nobuhle be-sans serif.
Umdibaniso weSans Serif kunye nefonti ebhalwe ngathi.
Ukuba uphawu lwakho ezithandwayo, zangoku nezonwabisayo, Unokukhetha uhlobo lochwethezo nge-Serif engqindilili kwaye ebetha kakhulu, njengaleyo inemfashini kuthungelwano lwentlalo, kwaye enye ine-serif elula kunye necekeceke yezicatshulwa. Uhlobo lokuchwetheza kwi-aksenti lunokuba nesibindi kakhulu kwaye lukekeke.
Umdibaniso weSerif kunye neefonti zeetali.
Eminye imigaqo yokudibanisa iifonti
Umyalelo obonakalayo kunye nolawulo oluphezulu
Qinisekisa iifonti ozikhethileyo ukuthobela ulawulo olubonakalayo, Oko kukuthi, eyona ibalulekileyo kwaye ibalulekileyo inokuchongwa kwezinye. Oku kuya ku misela iodolo ngendlela ulwazi oluqhutywa ngayo. Ukufezekisa ulawulo oluphezulu, ayisiyiyo kuphela kukhetho lwamagama olwaneleyo kodwa ikwakhona ukusebenzisa ngokufanelekileyo imibala, ubungakanani befonti, isibindi, njl.
Le cliché isebenza xa kudityaniswa iifonti. Ukuba uhlobo lobungakanani besihloko sakho lutyebile kwaye lunee-serif, uhlobo lwakho lokubhaliweyo lunokuba lincinci kwaye ngaphandle kweserif. Umbono kukuvelisa umahluko otsala umdla.
Musa ukudibanisa iifonti ezifanayo
Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, iifonti inokunxulumana okanye inento efanayo, nangona kunjalo, iifonti ezimbini ezibonakala ngathi azisebenzi ngokuchanekileyo. Isenokubonakala ngathi yimpazamo kwicala loyilo. Qinisekisa ukuba umahluko phakathi kweefonti ucacile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Khetha udibanise iifonti zorhwebo lwakho
Isithuba esibi ngumgangatho omtsha webhanki yomthombo ovulekileyo